Midowga Musharaxiinta oo sheegay in ay sii wadayaan Banaanbaxyada.[Video]
Muqdisho:-Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa saaka waxaa ay kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimada dalka waxaan ay ka wada hadlen shaqaaqadii ka dhacaday Daljirka dahsoon ee looga horistaagay Banaanbax ay doonayeen inay ku muujiyeen aragtidooda siyaasadeed ee dalka.
Gudoomiyaha Golaha Midowga Musharaxiinta ahna Madaxweynihii hore e Soomaaliya Sh Shariif Sh Axmed ayaa wax laga xumaado ku timamaay in cidamadii ay sidda hagara la’aanta u dhiseen loo adeegsado dad shacab ah oo samaynayey banaanbax nabadeed oo ay aragtidood xuquuqeed ay ku muujiyeen.
Gudoomiyaha Golaha Midowga Musharaxiinta ahna Madaxweynihii hore e Soomaaliya Sh Shariif Sh Axmed ayaa sheegay in aysan suura gal ka ahayn in Madaxweyne Farmaajo uu dalkaan ka qaban karo doorasho xor iyo xalaal ah maadaama loo adeegsaday hub waaweyn dad shacab ah oo si nabad ah u muujinayey aragtidooda.
Hoos ka Daawo shir jar’aad oo ay magaalada Muqdisho ku qabteen Golaha Midowga Musharaxiinta.
Dhinac kale warsaxaafeed ka soo baxay Golaha Midowga Musharixiinta ayey ku sheegeen in aysan joojin doonin dibadbaxyada ka dhanka dowladda Federaalka Soomaaliya ee Madaxweynaha ka yahay Maxamed C/laahi Farmaajo ayna cambaareynayaan falkii foosha xumaa ee shalay ay ka geysteen ciidamada dowadda Daljirka Dahsoon lana doonayey in lagu dilo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya , Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka Somaaliye iyo Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya.
Hoos ka Akhriso Warsaxaafadeedkii ka soo baxay Golaha Midowga Musharaxiinta